Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247596 times)
« Reply #330 on: July 18, 2011, 10:12:23 AM »
" မြင်း လိ မ္မာ "
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဆိုဗီယက် မြင်းတပ်တွင် အမှုထမ်းခဲ့သော
စစ်ပြန် အဖိုးကြီးက ပြောပြသည် ။
" အမှန်တကယ်တော့ မြင်းတွေ လိမ္မာပုံ အကြောင်း ပြောတဲ့စကားတွေဟာ
လိုတာထက်ပိုပြီး ပုံကြီးချဲ့ တဲ့ သဘောတွေ ပါတယ်လို့ယူဆချင်တယ်...
ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ပြောပြမယ်.. တစ်နေ့ကျုပ် ဒဏ်ရာရပြီး
မေ့မြောသွားတယ်.. ကျုပ်ရဲ့မြင်းဟာ ကျုပ်မပါပဲနဲ့ဆေးတပ်ဖွဲ့ရှိရာကို
ထွက်သွားတယ်.. ပြီးတော့ ဆရာဝန်ကို ခေါ်လာတယ်.. "
" ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြင်းတွေဟာ အင်မတန် လိမ္မာတယ်ဆိုတာ ပေါ်
လွင်တာပေါ့ . ဦးကြီးရဲ့ .. "
" ဒီလို အရင် စလို မပြောနဲ့ လေ.. ဒီကောင် ဘယ်သူ့ ကို ခေါ်လာတယ် ထင်
လို့ လဲ.. တိရစ္ဆာန် ဆရာဝန်ကို ခေါ်လာတာကွ.. "
« Reply #331 on: July 18, 2011, 10:20:38 AM »
" ၀န် မ ခံ တတ် သူ "
အဖိုးကြီးတစ်ဦးသည် စစ်တုရင် ကစားနည်းကို အလွန် ကြိုက်နှစ်သက်သည် ။
ကစားရာတွင် မကျွမ်းကျင်သော်လည်း မိမိ ရှုံးလျှင် ရှုံးကြောင်း ၀န်ခံရန် ၀န်
လေးတတ်သည် ။ တစ်နေ့ တွင် နာမည်ကြီး စစ်တုရင်သမား တစ်ဦးနှင့်ကစား
ရာတွင် သုံးပွဲဆက်တိုက် ရှုံးသည် ။ ဤတွင် " အကျည်စားသန်သူ တစ်ဦး "က
၄င်းအနား ရောက်လာပြီး မေးသည် ။
" ဘယ်လိုလဲ အန်ကယ်လ်.. ရှုံးပြန်ပြီလား... "
" ပထမပွဲမှာ တစ်ဖက်လူက မရှုံးဘူး....... ဒုတိယပွဲမှာ သူ့ အပေါ် ကျုပ် အနိုင်
မရဘူး... အဲ.. တတိယပွဲမှာ သရေ ဖြစ်စေချင်ပေမဲ့ သူက သဘောမတူဘူး "
« Reply #332 on: July 18, 2011, 10:29:07 AM »
" ကြက် သူ ခိုး "
တောမြို့ လေး တစ်မြို့ တွင်ဖြစ်သည် ။ အခြေအနေမဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်သည်
အိမ်တစ်အိမ်မှ မွေးထားသော ကြက်တစ်ကောင်ကို ခိုးကာ လူပြတ်သောနေရာ
တွင် အမွှေးများကို နှုတ်သည် ။ ဖြတ်လျှောက်လာသော ရဲသားက ၄င်းကို မြင်
သွားသည် ။ ကြက်သူခိုးသည် ရုတ်တရက် လန့် ဖြန့် ပြီး ကြက်ကို အနားက ရေ
အိုင်ထဲသို့လွှင့်ပစ်လိုက်သည် ။
" ဟေ့.. မလှုပ်နဲ့ .. မင်း အခုပဲ ကြက်ကို ခိုးတယ်ဆိုတာ ငါ မြင်တယ်.. "
" ကျနော် ဘယ်တော့မှ သူများ ပစ္စည်းကို မခိုးဝံ့ပါဘူးဗျာ.. "
" ဒါဖြစ်ရင် ဒီကြက်မွှေးတွေက ဘာလုပ်တာလဲ.. "
" ကြက်မ က သူ ရေဆင်းချိုးနေတုံး သူ့ အ၀တ်အစားတွေကိ်ု ခဏ ကြည့်ခိုင်း
« Reply #333 on: July 18, 2011, 10:39:03 AM »
" သား ရဲ့လက် ချက် "
" မိန်းမရေ.. ငါ့ ရဲ့အိပ်ထောင်ထဲက ပိုက်ဆံကို သားငယ်လေး
ယူသွားတယ် ထင်တယ်.. "
" ရှင်ကလဲ.. ဘာဖြစ်လို့ကလေးကို စွပ်စွဲရတာလဲ... စွပ်စွဲမဲ့
စွပ်စွဲရင် ကျမကို စွပ်စွဲရောပေါ့ တော်.. "
" အခု ကိစ္စက မင်း မဖြစ်နိုင်ဘူးကွ.. ပိုက်ဆံက တစ်ဝက်ကျော်ကျော်
" မ သောက် တော့ ခက် တယ် "
ဆရာဝန်က လူနာကို မေးသည် ။
" ခင်ဗျား ဆေးလိပ် သောက်သလား "
" မသောက်တတ်ဘူး ခင်ဗျ.. "
" ၀မ်းနည်းစရာပဲ.. တစ်ကယ်လို့ သာ ခင်ဗျား ဆေးလိပ်သောက်တတ်ရင်
ကျုပ်က ချက်ချင်း ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ပါလို့အကြံပေးမလို့အဲ့ဒါဆို
ခင်ဗျား သက်သာသွားမှာ ဗျ.. "
« Reply #334 on: July 18, 2011, 02:47:42 PM »
" လူ မှာ အ ၀တ် "
မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ သွားရန် မိသားစု တိုင်ပင်နေကြသည် ။ ဘာ အ၀တ်အစား ၀တ်ရမည်နည်း
ဆိုသည်ကို အတော်ကြာ ငြင်းခုံ ဆွေးနွေး ကြပြီးနောက် ဆံပင်အရောင်နှင့် လိုက်ဖက်သော
အ၀တ်ကို ၀တ်ရန် သဘောတူလိုက်ကြသည် ။
" သမီး.. အနက်ရောင် ၀တ်မယ်.. "
သမီးက ပြောသည် ။
" ကျနော်ကတော့ အညိုရောင် ၀တ်မယ်.. "
သား က ပြောသည် ။
" ကျမကတော့ မီးခိုးရောင် ၀တ်မယ်ရှင့်.. "
အမေ လုပ်သူက ပြောသည် ။ အဖေ ဖြစ်သူ " ဦးထိပ်ပြောင် " က မကျေ မချမ်းဖြင့်
" ဟေ့... မင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်း ဆိုရင် ငါက ကိုယ်လုံးတီး သွားရမလို ဖြစ်နေပြီ ဟေ့.. "
« Reply #335 on: July 18, 2011, 02:55:01 PM »
" အ ထင် မှား မ ခံ နိုင် ဘူး "
၁၉၈၆ ခုနှစ် ။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတွင် အရက်သေစာ သောက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကို
အရှိန်မြှင့် အကောင်အထည်ဖော်နေချိန် ဖြစ်သည် ။ စက်ရုံ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ၄င်း၏ အတွင်း
ရေးမှူး မ သည် တံခါးကိုပိတ်ကာ ဆိုဖာပေါ်တွင် ကြည်နူးနေကြသည် ။ ဤ အချိန်တွင် အ
ပြင်မှ တံခါးခေါက်သံကို ကြားရသည် ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် အ၀တ်အစားများကို အလျှင်အ
မြန် ကောက်ဝတ်ကာ တံခါးသွားဖွင့်ရန် ခြေလှမ်းပြင်သည် ။ မသွားမှီ အတွင်းရေးမှူးမ ကို ဤ
သို့မှာသည် ။
" မင်း မထနဲ့ ..ဒီအတိုင်းလှဲနေ.. တော်တော်ကြာ တို့ နှစ်ယောက် အရက်သောက်နေကြတယ်လို့ 
« Reply #336 on: July 18, 2011, 03:08:42 PM »
" အပ် ကြောင်း ထပ် သွား တာ ပါ ပဲ "
သူငယ်ချင်းမ နှစ်ယောက် စကားပြောနေကြသည် ။
" ဒီနေ့ မနက် အိုင့် လက်ထဲက ပန်းကန်ပြား လွတ်ကျပြီး ကွဲသွားတယ်
နိမိတ် မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်.. အိုင့် ဗိုက်ထဲက ကလေးကို ထိခိုက်
မှာပဲ စိုးတယ်.. "
" ယူကလဲ အဓိပ္ပာယ် မရှိလိုက်တာ.. အိုင့်ကို အိုင့်အမေ ကိုယ်ဝန်ရှိတုံးက
ဓါတ်ပြားစက်ပေါ် တက်ထိုင်မိတယ်.. ဘာမှမဖြစ်...ဘာမှမဖြစ်...ဘာမှမဖြစ်
" လေ ယာဉ် မှူး အ လို ရှိ သည် "
ခရီးသည်တင် လေယာဉ်တစ်စီးပေါ်တွင် ဖြစ်သည် ။
" ခရီးသည်တွေထဲမှာ ဆရာဝန် ရှိပါသလားရှင်. " ဟူသော လေယာဉ်မယ်၏
ရေဒီယိုမှ မေးမြန်းသံကို ကြားကြရသည် ။ လူရွယ်တစ်ဦးသည် မိမိ၏ ထိုင်ခုံမှ
ထကာ ပိုင်းလော့ ၏ အခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည် ။ မကြာမီ ဆရာဝန် လူရွယ်၏
ကြေညာချက်ကို ကျန်ခရီးသည်များက အောက်ပါအတ်ိုင်း ကြားကြရသည် ။
" ခရီးသည်တွေထဲမှ လေယာဉ်မောင်းတတ်သူ ရှိပါသလား ခင်ဗျာ. "
« Reply #337 on: July 18, 2011, 03:13:16 PM »
" ထိမ်း ချုပ် တတ် သူ "
မွန်တီကာလိုရှိ ကာစီနို ကစားပွဲခမ်းမ မှ လူနှစ်ယောက် ထွက်လာသည် ။
တစ်ယောက်မှာ အ၀တ်အစား မပါ ၊ အခြားတစ်ယောက်မှာ အတွင်းခံ
ဘောင်းဘီတိ်ုသာ ပါသည် ။ " ကိူယ်လုံးတီး " က ဤသို့ပြောသည် ။
" ခင်ဗျားကို ကျနော် သဘောကျတယ်.. ဖဲကစားရာမှာ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်
ထိမ်းချုပ်တတ်တယ်.. ဘယ်အချိန်မှာ တော်ရမလဲ ဆိုတာ သိတယ် "
« Reply #338 on: July 18, 2011, 03:50:53 PM »
" ရုပ် ရှင် ကား ညံ့ လို့"
ရုပ်ရှင်ရုံမှ လူရွယ်တစ်ယောက် ထွက်လာသည် ။ လက်မှတ်ရောင်းသူ ထိုင်နေသော
အပေါက်ရှေ့ တွင် ရပ်လိုက်ကာ သေနတ်နှင့်ချိန်ပြီး ခြိမ်းခြောက်သည် ။
" ရုပ်ရှင်ကား အင်မတန် ညံ့တယ်..။ ကျုပ်နဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိတ်သတ်တွေ အားလုံးရဲ့ 
လက်မှတ်ဖိုးတွေ ချက်ချင်း ပြန်ပေးစမ်း "
" ၀မ်း မ နည်း နဲ့"
တရားသူကြီးက တရားခံကို မေးသည် ။
" ထောင်ကျဘူးသလား.. "
" တစ်ခါမှ မကျဘူးပါဘူး ခင်ဗျာ.. "
တရားခံ လူငယ်က ငိုယိုလျက် ဖြေသည် ။
" ၀မ်းနည်းမနေပါနဲ့ ... ဒီတစ်ခါတော့ ကျရပါစေ့မယ်.. "
« Reply #339 on: July 20, 2011, 01:06:56 PM »
" တိတ် တိတ် နေ "
ကိုချူချာ လှေလှော်လာသည် ။ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ လှေတစ်စီးကို တွေ့ သည် ။
လှေနှစ်စီးဆုံကြသောအခါ ဒုတိယလှေပေါ်မှ ယောင်္ကျားကြီး နှစ်ယောက်က ကို
ချူချာကို မေးသည် ။
" ဒီအနားမှာ အသံဆိုးကြီးနဲ့အော်နေတဲ့ လူကို မတွေ့ မိဘူးလား.. "
" ဟင့် အင်း.. "
" တွေ့ ရင် ကျုပ်တို့ ကို အကြောင်းကြားဗျာ.. "
" ဟုတ်ကဲ့.. "
မြစ်ကြောင်းအတိုင်း ချူချာ ဆက်လှော်သည် ။ တစ်နေရာတွင် " ကယ်ကြပါ..
ကျုပ် ရေနစ်နေပြီ.. " ဟု လူတစ်ယောက် တစ်စာစာ အော်နေသည်ကို တွေ့ 
ရသည် ။ ချူချာက ၄င်းကို လှော်တက်ဖြင့် ခေါင်းကို ရိုက်သည် ။ ပါးစပ်မှလည်း
" ဟေ့လူ.. တိတ်တိတ်နေ.. ဟိုမှာ ခင်ဗျားကို လိုက်ရှာနေကြတယ်.. "